Android Development Android Development – <Myat Min Soe />
<Myat Min Soe />
Android Development 10: Android Fragments
Android Fragments Android Device တွေဟာ Screen size အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် layout ကိုအသေမထားပဲ screen size ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် mobile + tablet နှစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် layout ကိုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်သေချာရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုး layout အမျိုးမျိုးချမယ်ဆိုရင် Fragment တွေကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ Fragment ဆိုတာကတော့ Activity အသေးစား (sub-activity) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Activity တစ်ခုမှာ Fragment များစွာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ Tablet မှာ Activity တစ်ခုပါပြီး Fragment A နဲ့ Fragment B ဆိုပြီး Fragment နှစ်ခုပါပါတယ်။ mobile မှာတော့ Activity A မှာ Fragment […]
person Myat Min Soeaccess_time May 22, 2016launch Read More 1
Android Development 9: Android Lists
Android Lists List မစခင် အရင်ဆုံး Activity အသစ်ဆောက်လိုက်ရအောင်။ New > Activity > Empty Activity ကိုရွေးပြီး ListActivity လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ။ List ဆိုတာကတော့ Android မှာအသုံးများပါတယ်။ List တစ်ခုမှာ row တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ row တိုင်းကို list ထဲမှာမရှိပါဘူး။ user scrolling လုပ်တဲ့အချိန်မှ row တွေကို ဆောက်ပြီး အရင် row တွေကို ဖျက်ပစ်တဲ့ Recycle စနစ်နဲ့ လုပ်တာပါ။ ListView တစ်ခုမှာ သူ့အထဲမှာပါမဲ့ Object Array ရယ်, Object တွေကို Row တစ်ခုခြင်းစီကို ထည့်ပေးမဲ့ Adapter ဆိုတာ […]
Android Development 8: Android Logging
Android Logging Log ဆိုတာကတော့ ကိုယ့် code ကို run နေစဉ်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာ လက်တွေ့မြင်နေရဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Java မှာ System.out.print() သုံးပြီး Console မှာစာပြသလိုမျိုးပါ။ Android Log ကို Android Studio အောက်က Logcat ထဲမှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Log တွေများလာရင် လိုက်ကြည့်ရတာရှုပ်တာကြောင့် Level အမျိုးမျိုးခွဲပြီး log ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Android Studio Logcat မှာလဲ Level အလိုက် log တွေခွဲပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Verbose အနက်ရောင်နှင့်ပြမည်။ Log.v() method ကိုအသုံးပြုရမည်။ Debug အပြာရောင်နှင့်ပြမည်။ Log.d() method ကိုအသုံးပြုရမည်။ Info အစိမ်းရောင်နှင့်ပြမည်။ Log.i() method ကိုအသုံးပြုရမည်။ Warning […]
person Myat Min Soeaccess_time May 22, 2016launch Read More
Android Development 7: Android Resources
Android Resources Android Resource ဆိုတာကတော့ Application မှာအသုံးပြုမဲ့ ပုံတွေ၊ animation တွေ၊ စာသားတွေ၊ အရောင်တွေ အစရှိတာတွေကို သိမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drawable Resources drawable resource ထဲမှာတော့ ကိုယ့် application ထဲမှာ သုံးပဲ ပုံတွေ design တွေကို သိမ်းဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ res > drawable folder ထဲမှာ new > drawable resource file ဆိုတာရွေးပြီး button လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ။ button.xml ဆိုပြီး xml file တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။ xml ထဲမှာ အောက်ကအတိုင်းရေးလိုက်ပါ။ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <item android:state_pressed="true"> […]
person Myat Min Soeaccess_time May 21, 2016launch Read More
Android Development 6: Android Manifest & Intents
Android Manifest & Intents Android Manifest Android Application တိုင်းမှာ AndroidManifest.xml ဆိုတာပါဝင်ပါတယ်။ Manifest ထဲမှာ Application ရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသိမ်းထားပါတယ်။ Application ရဲ့ java package name, Application Icon, Application ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Activity တွေ Service, Provider, Receiver အစရှိတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ Application မှာအသုံးပြုမဲ့ permission တွေ (ဥပမာ location, storage access) အစရှိတာတွေကိုလဲ Manifest ထဲမှာထည့်ရေးရပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ မာတိကာလိုပါပဲ။ Manifest ကိုကြည့်လိုက်ရင် Application ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ Android Intents Android Intent ဆိုတာကတော့ Android Component […]
person Myat Min Soeaccess_time May 21, 2016launch Read More 2
Android Development 5: Android Activity Life Cycle
Android Activity Life Cycle Android Studio ရဲ့ ဘယ်ဘက်ဘေးက Project Explorer ကနေ app > java > package name (com.xxxx.tutorials) > MainAcivity.java ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ သူ့ထဲမှာ onCreate() ဆိုတဲ့ method တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ onCreate() method ထဲမှာ setContentView(R.layout.activity_main); ဆိုတဲ့ method ကို ထပ်ခေါ်ထားပါတယ်။ setContentView method မှာ int parameter ပေးရပါတယ်။ layout folder ထဲမှာ xml တစ်ခုဆောက်လိုက်တာနဲ့ R ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ activity_main ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ static int value တစ်ခုကို […]
Android Development 4: Android Layouts
Android Layouts Android App မှာ Layout တွေကို xml နဲ့ရေးပါတယ်။ res >> layout folder ထဲမှာရှိပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် activity_main.xml ကို run လိုက်ရင် မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Layout file မှာ ViewGroup နဲ့ View ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ViewGroup ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ သူ့အထဲမှာ ပါတဲ့ child view တွေကိုနေရာချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ View ဆိုတာကတော့ လက်တွေ့မြင်နေရတယ် စာတွေ၊ ခလုပ်တွေ၊ ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Layout Manager ဆိုတာကတော့ View တွေကို ဘယ်လိုနေရာချမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ViewGroup ရဲ့ subclass တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအများဆုံး Layout Manager ၄ ခုရှိပါတယ်။ […]
person Myat Min Soeaccess_time May 21, 2016launch Read More 1
Android Development 3: Hello World!
Hello World! Programming Language တစ်ခုစတိုင်း Hello World! ကို print ထုတ်ပြီးစလေ့ရှိပါတယ်။ Android ကိုလဲ Hello World နဲ့စလိုက်ရအောင် ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Android Studio Project တစ်ခုဆောက်ပြီး ပထမဆုံး Application ကို ဖုန်းပေါ်မှာ run မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android Studio ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်က recent project ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်ကရေးလက်စ project တွေရှိလို့ ပေါ်နေတာပါမဟုတ်ရင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး Android SDK သွင်းပြီးပြီလားစစ်ပါမယ်။ Configure >> SDK Manager ကိုရွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယ်သွင်းထားတာတွေကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ System Image ဆိုတာကတော့ emulator အတွက်ဖြစ်ပြီး သွင်းစရာမလိုပါဘူး […]
Android Development 2: Android Studio
Android Studio Android Studio ဆိုတာကတော့ Android Development အတွက် Google ကတရားဝင်ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ IDE ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Eclipse မှာ plugin တွေသွင်းပြီး Android Developer Tools (ADT) ဆိုပြီးအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ADT ထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ Android Studio ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Android Studio ဟာ IDE တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IntelliJ Idea ကိုအခြေခံထားပြီး Android Development အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ tools တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ Intelligent Code Editor Android အတွက်အဓိကဖြစ်တဲ့ Java နဲ့ xml code တွေရေးတဲ့အခါမှာ code editor […]
person Myat Min Soeaccess_time May 21, 2016launch Read More 4
Android Development 1: Introduction
Android ဆိုတာဘာလဲ Android ဆိုတာကတော့ Google ကထုတ်ထားတဲ့ Operating System တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Linux Kernel ကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားပြီး ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေအတွက် ထုတ်ထားတာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ စမတ်နာရီတွေ ကားတွေမှာပါ Android စနစ်ကိုအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ Android ကို Google ကဝယ်ယူခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ လူသုံးအများဆုံး Mobile Operating System တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီဇယားကတော့ Android ရဲ့ version တွေဖြစ်ပြီး api level ကတော့ development လုပ်ရာမှာအသုံးပြုမဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Platform Version API Level VERSION_CODE Android 6.0 23 MARSHMALLOW Android 5.1 22 […]
Dark Theme &Light Theme
Java Programming 14: Java Exception
Java Programming 13: Inheritance